Tanàna Japoney Misarika Mpizaha Tany Noho ny Fijerena Fiarandalamby Fotsiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2017 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Română , Español, Aymara, Italiano, English
“Hitachi Class 800. York.” Sary avy amin'ny mpisera Flickr Carl Spencer. Lisansa: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
Tamin'ny 6 Martsa, olona tokony ho 30.000 eo no nanao valalamanjohy an-dalamben'i Kudamatsu, tanàna kely iray ao amin'ny prefektioran'i Yamaguchi , tokony ho 900 kilometatra any andrefan'i Tokyo, mba hijery ny andiana Class 800 izay karazana fiarandalamby mandeha elekitirika sy gazoala taterin'ny tiraktera avy ao amin'ny orinasa Hitachi ho any amin'ny seranan-tsambo.
Nambara tao an-tanàndehibe ny fanaterana ilay fiarandalamby ho any amin'ny seranan-tsambo, anisan'izany ny lalana izay handalovany sy ireo toerana tsara indrindra mba hanaovana topimaso ilay fiarandalamby. Tanàna kely iray manana mponina miisa 55.000 ​​ tsy dia fantatra loatra ho toeram-pizahan-tany amin'ny ankapobeny i Kudamatsu. Na izany aza, miroborobo be tokoa ny fizahantany anatiny ao Japana hany ka misy ny tsy fahampian'ny toerana fandraisam-bahiny any amin'ireo toerana betsaka mpizaha tany. Misy ny ezaka fampiroboroboana sy fampivelarana ny fisarihana mpizaha tany isam-paritra ao Japana mba hihazonana ny filàna.
Tena tsara indrindra fotsiny izao ilay “Tetikasa Fitaterana ny Fiaran-dalamby Haingam-pandeha Mandalo Ny Lalàmbe Makany Amin'ny Seranan-tsambo “. Na dia 4 kilaometatra fotsiny aza ny elanelan'ny orinasa sy ny seranan-tsambo dia mampiseho ny zava-misy momba ny fanatrehan'ny olona miisa 30,000 fa tokony ao Kudamatsu ihany no miseho ny zava-nitranga. Tena manantena anao hanohy ity tetikasa ity hatrany aho!
Na dia sarotra aza ny fomba hijerena ny mety hampalaza ity hetsika ity ho an'ny mpitsidika an'i Japana dia toa hita fa nahomby izany niaraka tamin'ny kolontsaina mampientanentan'ny mpankafy fiarandalamby tao Japana ” ilay karazana fizahan-tany vaovao nahasarika olona liana amin'ny indostirian'ny fanamboarana ao Japana “, izay nirohotra mba hijery ilay fiarandalamby ho any amin'ny seranan-tsambo izay ho alefa any amin'ny Fanjakana Britanika.
Mety hampisy lanjany ara-panembonana ho an'ireo mpankafy lalamby Japoney ny fiarandalamby Class 800 nalaina avy amin'ny fiarandalamby andiany 681 haingam-pandeha tao Japana izay mampitohy an'i Osaka sy ireo tanàndehibe any amoron-dranomasin'i Japana izy ity. Ny 681 no fiarandalamby haingam-pandeha indrindra amin'ny lalamby tery eto amin'izao tontolo izao, izay afaka mandeha mihoatra ny hafainganam-pandeha 160 km isan'ora.
Natao ho an'ny Fanjakana Britanika ny fiarandalamby Class 800 ao Kudamatsu izay fitaovana ho ampiasaina ho amin'ny Fandaharan'asa Fitaterana Haingam-pandeha Mampitohy Tanàndehibe roa.
The train at platform 1 of @NetworkRailPAD is the Class 800 #GreenMachine, departing soon for the #greaterwest pic.twitter.com/MI7EglaBBK
Class 800 no fiarandalamby ao amin'ny fiantsonana 1 @NetworkRailPAD, hiainga tsy ho ela ho any #greaterwest. [andrefana]
Raha ao Japana sy any amin'ny Fanjakana Britanika no hanamboarana ireo fiarandalamby, izay orinasa antenaina mba hamorona asa maherin'ny 700 dia nilaza mivantana ny governemanta Japoney fa atahorana hametraka olana amin'ny fampiasam-bola Japoney toy izany any amin'ny Fanjakana Britanika amin'ny hoavy ny Brexit .
18 ora izayMalezia